Soomaaliya, 07 February 2019 page 1
Halkee mareysaa magacaabista guddoomiyaha Bangiga Dhexe
Ciidanka iyo Saraakiisha Dagaalka ku Dhinto Xaq ma Helaan?
Qaar ka mid ah eheladda askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku dhintay dagaalada ay dowladdu kula jirto ururka Al-shabab ayaa ka cabanaya in aysan si wanaagsan u helin, xuquuqdi ay ku lahaayeen dowladda.
Warbixin: Sugnaanta Cuntada Soomaaliya
Hay’adda cuntada iyo beeeraha adduunka xafiiskeeda qaabilsan falanqaynta cuntada iyo nafaqadarrada (FSNAU) ayaa sheegay in tiro ka badan 1.5 malyuun qof oo jooga Soomaaliya ay weli ku sugan xaalad cunno yari ba’an ama kasii liidata.
Saameynta hakadka ku yimid soo saaridda baasaboorka Soomaaliga
Muddo ka badan la bilood ayaa waxaa xaniban sameynta baasaborka Soomaaliga ah. Xanibaadda baasaboorka ayaa saameyn ku yeeshey dadbadan oo u safri lahaa xalado caafimaad, qoys iyo waxbarasho.
G. Wasiirrada K. Galbeed oo la Magacaabay
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta-gareen ayaa maanta magacaabay 10 ka mid ah golihiisa cusub ee wasiirada, iyada oo golahan ay ku jiraan xubno horey uga tirsanaa wasiiraddii maamulkii hore.
India: Abwaan Baarleex oo Geeriyooday
Abwaanka oo ay da'diisu ahayd 65 ilaa 66 sano jir ayaa ku geeriyooday magalada Heydarabad ee waddanka Hindiya, halkaasoo looga daweynayay xanuun dhinaca wadnaha ah oo uu in muddo ahba la il darnaa.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaad ku dhageysan doontaan qubanayaal ku saabsan siyaasadda Somalia, waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan
Maamulka Hiiraan oo ka hadlay duqeyn ka dhacday gobolka
Maamulka Gobolka Hiraan ayaa sheegay in duqeynta lala beegsaday saraakiil iyo horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo halkaa uu uga socday shir weyn.
Faaqidaadda: Amni-darrada ka jirta Soomaaliya
Dagaal ka dhex socda Daacish iyo Al-Shabaab
Wararkii ugu dambeeyey doontii ku degtay xeebta Jabuuti
Laba doonyood oo ay saarnaayeen tahriibayaal oo ka shiraacday deegaanka Godoria ee waqooyiga Bari dalka Djibouti talaadadii ayaa degay 30 daqiiqo un markii ay badda ku jireen.